Ukufaneleka of Aries futhi Aquarius kungenziwa ngokuthi alufakwa! emshadweni wabo - lena ngempela isikhathi ibhomu. Aries uyakwazi kweso babhebhethekise intukuthelo Aquarius, bese ulinda enkingeni ... Funda ngezansi.
Ingabe Aries futhi Aquarius ehambisanayo?
Abanye abantu bakholelwa ukuthi inyunyana nalezi zibonakaliso ezimbili zezinkanyezi cishe impumelelo, ukuthi sidalwe ezulwini. Ngokusho idatha ethile, izinkanyezi abalingani evumayo: inyunyana yabo bazalwa izingane elikhanyayo, abanamakhono futhi zokudala. Eminye imithombo bathi Aries futhi Aquarius ayiwona neze nje umlingani. Sizogxila incazelo yaleli yesibili version kwedivayisi yalezi zimpawu ezingenhla.
uthando ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Aries futhi Aquarius unomona kakhulu. Lena ingozi yabo enkulu kakhulu. Uphathina kuqala ngokuvamile umnikazi Creepy! Ngisho emehlweni prying ku umkakhe akwazi ukuvusa isikhwele Aries futhi ukubenza abakho wedwa. Kuyinto edabukisayo ukuthi engawuqondi yiqiniso elisobala: ukubenza abakho wedwa yakhe nomhawu engenabulungisa ukubulala zonke izinzwa endaweni umlingani (uma leso, kusenzima ngempela fast, ngaphandle ithuba kancane yokusiza umuntu ukuba aphefumule).
nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu ngokocansi
Aquarius ngokwemvelo akuyona umthandi abanothando. Ngaye, kuyinto ebaluleke kakhulu kunoMbuso engxenyeni engokomoya yalesi ukuphila, kunokuba komzimba nezinjabulo ... Ngesikhathi esifanayo akayena ngokumelene ucwaningo embhedeni, kodwa uzama konke ngokulinganisela. Yingakho wobulili indima esemqoka kufanele inikwe Aries, ngubani kwaba yisendlalelo.
nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu Umkhaya
Khumbula ukuthi e- somshado of Aries futhi Aquarius kukhona ezingibeni eziningi. Ngamunye the abalingani ifuna labo noma ezinye imizwa nezithakazelo, ungenza kudaleka ezinkulu emkhayeni. Aries akudingeki kakhulu ukukhombisa authoritarianism zabo, ivimbela emoyeni enkululeko Aquarius ...
Long-term ubudlelwano emndenini phakathi kwamalungu nalezi zibonakaliso ezimbili zezinkanyezi zingenzeka kuphela uma Aries futhi Aquarius bahlangene eseluphele kunalokho ovuthiwe. Uma kwenzekile lokhu ngaphambili, esikwaziyo kakade wena, uthola okuthile like ibhomu isikhathi. Nge isethi kahle izimo abavuthiwe Aries uyohlale ukujabulela ukusekela Aquarius, nokuthi esikhundleni salokho ngeke zibabaza nobuciko nemfundo Aries. Kuphela kuleli cala bakwazi ukwakha union ivumelane kakhulu.
Aries futhi Aquarius - amabili engenangqondo ku umphefumulo womuntu. Besaba bona alivume. A umthamo double ubungqabavu nokuzimela ngokomzwelo komunye nomunye aziholele ups njalo nezinto ezinhle nezimbi. Babhekene nomunye noma nini Awukwazi ukwabelana phakathi kwawo phambili. Konke lokhu kungaholela yokuthi Aries bayofuna kusukela Aquarius egcwele ukuzisola nangobuqotho. Aries kuyinto kunesidingo esiphuthumayo bayakhohlwa ukuthambekela kwawo ekuholeni, bayeke zonke izinhlobo nezicelo ngokumelene Aquarius. Kungenjalo, engena zamandla Aries kungenza kube ukuze uzoqala lokuxhaphaza umlingani wakho kanye nabanye abantu nalobo izindlela ngokungafanele. Aquarius ngokuqinisekile uqaphela namaqhinga akhe futhi ushiye umlingani emakhazeni.
Izimbali Aries ngesikhathi sokuzalwa komuntu
Yini itshe Cancer ofanele: Izimfihlo ababhula ngezinkanyezi
Amatshe Lviv: bayini?
Izinhlobo zezimoto ngohlobo umzimba
EBaranovichi: izinto edolobheni nasezindaweni ezizungezile